ကားဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ချက်မီး ကျော်ခွထားတဲ့ ဂျင်း ကားတွေကို သတိထားမိစေဖို့
အခုတလော ချက်မီးတွေ ကျော်ခွထားခံရတဲ့ကားတွေ ကားမောင်းရတာအဆင်မပြေလို့ဆိုပြီး တော်တော်များများရုံကို ရောက်လာတယ်ဗျ။ ကားကိုသော့ဖွင့်၊ စက်နှိုးကြည့်လိုက်တော့ ဒိုင်ခွက်ထဲမှာ ဘာချက်မီးမှ လင်းမနေဘူး။ အဲဒါနဲ့ မသင်္ကာလို့ ကားစက်သတ်၊ သော့ဖွင့်ကြည့်တော့ ကားရဲ့ဒိုင်ခွက်ထဲက ချက်မီးတွေပေါင်းထားတာ သွားသတိထားမိတယ်။ သေချာအောင် Diagnostic စက်နဲ့ယူထိုးကြည့်တော့ Error Code တွေ Fault Code တွေ တသီကြီးတက်လာတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကားပိုင်ရှင်ကို ဘာတွေလုပ်ထားလည်းမေးကြည့်တော့ သူလည်း ဒီကားဝယ်ထားတာ မကြာသေးဘူးတဲ့။
အဲဒါနဲ့ ကျနော်လည်း "အကို့ကားက ချက်မီးတွေ ကျော်ထား ခွထားတယ်၊ လွယ်လွယ်ပြောရရင် ကားမှာပျက်နေတဲ့ ပြင်ဖို့လိုတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ပစ္စည်းတွေကို မပြင်ဘဲ၊ ဒီ ရောဂါတွေ ဖြစ်နေတာကိုပြတဲ့ ချက်မီးတွေကို ဘာမှမဖြစ်သလို၊ ဘာရောဂါမှ မရှိသလို ကျော်ခွထားတယ်" ဆိုပြီး ရှင်းပြရတယ်။
ပိုသေချာအောင် ဒိုင်ခွက်ဖြုတ်ပြီးစစ်ကြည့်လိုက်တော့ ဒိုင်ခွက်ထဲကချက်မီးနေရာတွေကို ကျော်ထား၊ ခွထားတာတွေ မွစာကြဲနေအောင်တွေ့ရတော့တာပါပဲ။ ဒါမျိုး ကျော်ခွထားတဲ့ ကားတွေဝယ်မိတယ်ဆို ကားဝယ်သူ ကားပိုင်ရှင်တွေအတွက် ရောဂါဗရပွနဲ့ ကားကို ဈေးကြီးပေးဝယ်မိတာဖြစ်လို့ အများကြီးနစ်နာပါတယ်။ ကျော်ထားခွထားတဲ့ Error တွေက လွယ်လွယ်ကူကူ ဖြေရှင်းရတဲ့ ပြဿနာတွေဆို တော်ပါသေးတယ်။ ငွေကုန်ကြေးကျများတဲ့ ပစ္စည်းတွေ အစားထိုးလဲလှယ်ရမယ့် ချက်မီးတွေဆို ကားဝယ်သူတွေအတွက် ဆင်ဖိုးထက်ချွန်းဖိုးကြီး၊ ထမ်းပိုးထက် လက်ခကြီးဖြစ်ရတော့မယ့် အခြေအနေပါ။ ဒီလိုအခြေအနေတွေကို ကားဝယ်သူတွေမကြုံတွေ့ရစေဖို့ရယ်၊ ဒီလို ကျော်ခွထားတဲ့ကားတွေကို အလွယ်တကူ သိရှိစေနိုင်ဖို့အတွက် ချက်မီးတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတ အကြောင်းလေးတွေ တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
Check Light ဆိုတာ ဘာလဲ?
Check Light ဆိုတာက အခုလက်ရှိကျနော်တို့ အသုံးပြုနေတဲ့ ခေတ်ပေါ် EFI (Electronic Fuel Injection) နည်းပညာသုံး ECU (Engine Control Unit) ဆိုတဲ့ ကွန်ပျူတာစနစ်နဲ့ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကားတွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့ ကားနှင့်ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ၊ စနစ်တွေ၊ ပျက်စီးချို့ယွင်းလာတဲ့အခါမှာ ကားမောင်းသူကိုအချက်ပေးသတိပေးတဲ့ မီးလေးတွေပါ။ ဒီ Check Light တွေကကားရဲ့ Instrument Panel (ဒိုင်ခွက်) ထဲမှာ ဖော်ပြထားလေ့ရှိပြီး၊ ကားစက်မနှိုးသေးဘဲ ကားသော့ဖွင့် (On) လိုက်တာနဲ့၊ ဒိုင်ခွက်ထဲမှာ ဒီကားမှာပါဝင်တဲ့စနစ်ပေါင်းစုံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Check Light တွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီး၊ ကားစက်နှိုးလိုက်ပြီး စက်နှိုးသွားတယ်ဆိုတာနဲ့ ဒီမီးတွေ အကုန်ငြိမ်းသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ ဒိုင်ခွက်ထဲမှာ Check Light တစ်ခုခု ကျန်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ Check Light ရဲ့ သင်္ကေတကို ကြည့်ပြီး ဘယ်စနစ်ချို့ယွင်းနေတယ်ဆိုတာ အလွယ်တကူသိရှိအောင် ဖန်တီးထားတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ကားဒိုင်ခွက်တိုင်းလိုလိုမှာပါတဲ့ Check Light တွေက
Engine Check Light (အင်ဂျင်ချက်မီး)
Engine Check Light ဆိုတာကဒိုင်ခွက်ထဲမှာ အင်ဂျင်တုံးပုံစံ အဝါရောင်မီးလေးကို ခေါ်တာပါ (ပုံမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်)။ တချို့ကားတွေမှာတော့ (Check Engine) ဆိုပြီးစာသားနဲ့ ရေးထားတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ ဒီအင်ဂျင်ချက်မီးလေးကတော့ ဘယ်ကားရဲ့ဒိုင်ခွက်မှာမဆိုပါပြီး သော့ကို On အနေအထားကိုလှည့်လိုက်တာနဲ့ ပေါ်လာရမှာဖြစ်ပြီး၊သော့ကို Start ဆီလှည့် စက်နှိုးသွားတာနဲ့ဒီချက်မီးလေးက ပျောက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
စက်နှိုးသွားတဲ့အချိန် ဒါမှမဟုတ် ကားမောင်းနေတဲ့အချိန် အဲဒီမီးလေးက လင်းလာမယ်၊ မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကားအင်ဂျင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စနစ်တစ်ခုခု ချို့ယွင်းလာပြီဆိုတာ သိရမှာဖြစ်ပြီး Diagnostic Scanner Tool တွေနဲ့ စစ်ဆေးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Engine Check Light လင်းစေတဲ့ အကြောင်းရင်းများစွာရှိပြီး အဖြစ်များလေ့ရှိတဲ့ အကြောင်းရာတွေကတော့
Oxygen Sensor မကောင်းတာ
Spark Plug (or) Ignition Coil တွေမကောင်းတာ
Mass Air Flow Sensor တွေမကောင်းတာ
EGR Valve မကောင်းတာ
Catalytic Converter (ကျောက်ဇကာ) မကောင်းတာ အစရှိတဲ့ ပြဿနာတွေ အဖြစ်များလေ့ရှိပါတယ်။
Engine Oil Pressure Warning Light (အင်ဂျင်ဝိုင် သတိပေးအချက်ပြမီး)
အင်ဂျင်ဝိုင် သတိပေးအချက်ပြမီးဆိုတာက ဆီခွက်လေးပုံစံ မီးခွက်လေးပုံစံမှာ ဆီအစက်လေးကျနေတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ ကားစက်စနှိုးဖို့သော့ဖွင့်လိုက်ရင် ပေါ်လာရမှာဖြစ်ပြီး၊ စက်နှိုးပြီးနောက်ပိုင်း ပျောက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုသော့ဖွင့်ပေါ်၊ စက်နှိုးပျောက်ဆိုရင် ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီး ဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူး။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ကား စက်နှိုးပြီးလည်း ပုံမှာပြထားတဲ့မီးက ဆက်လင်းနေတယ် ဒါမှမဟုတ် ကားမောင်းနေရင်း ဒီမီးလင်းလာတယ်ဆိုရင် သင့်ကားအင်ဂျင်ထဲမှာရှိတဲ့ အင်ဂျင်ဝိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေပါပြီ။
ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတာက အင်ဂျင်အောက်မှာရှိတဲ့ Crankcase ထဲက ဆီစစ်မှာ ဂျိုးတွေပိတ်ပြီးအင်ဂျင်ထဲက အင်ဂျင်ဝိုင်လမ်းကြောင်းတွေမှာ အင်ဂျင်ဝိုင်မတက်တာ၊ Engine Oil Filter ကြေးပိတ်ပြီး အင်ဂျင်ဝိုင်မတက်တာ၊ အင်ဂျင်ဝိုင်လျော့နေတာ၊ လမ်းသွားရင် Crankcase ပေါက်ပြီး အင်ဂျင်ဝိုင်တွေမရှိတော့တာ၊ Engine Oil Pump ပျက်တာ အစရှိတဲ့ ပြဿနာတွေအဖြစ်များပါတယ်။
မိတ်ဆွေလုပ်သင့်တာက ဒီမီးပေါ်လာတယ်ဆို အင်ဂျင်စက်သတ်ပါ။ အင်ဂျင်ဝိုင်တိုင်းတာကြည့်ပါ။ လျော့နေတယ်ဆို ဖြည့်ပါ။ အင်ဂျင်ဝိုင် Level ပြည့်အောင်ဖြည့်ပြီး စက်ပြန်နှိုးကြည့်ပါ။ ဒီမီးမပျောက်ဘူးဆိုရင်တော့ ကျွမ်းကျင်ဝပ်ရှော့ဆရာခေါ်ပြီး စစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Battery Charge Warning Light (ဘက်ထရီ အားသွင်းစနစ် အချက်ပြမီး)
ဒီ ဘက်ထရီအိုးပုံမီးလေးကတော့ ကားမှာရှိတဲ့ ဘက်ထရီအားသွင်းစနစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့မီးလေးပါ။ ဒီမီးလေးကလည်း အပေါ်က အင်ဂျင်ဝိုင်မီးလေးလိုပဲ၊ သော့ဖွင့်တဲ့အချိန်လင်းနေရမှာဖြစ်ပြီး ကားစက်နှိုးလိုက်တဲ့အချိန်၊ စက်နှိုးသွားတဲ့အချိန်ဆို ပိတ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုစက်နှိုးနေတဲ့အချိန် မပိတ်သွားဘူး ဒါမှမဟုတ် ကားမောင်းနေတဲ့အချိန်လင်းလာတယ်ဆိုရင် ဒါဟာကားမှာရှိတဲ့ အားသွင်းစနစ် ချို့ယွင်းနေတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြတာပါ။ ဒီမီးလင်းလာစေတဲ့အကြောင်းတွေကတော့
ဒိုင်နမို (Alternator ပျက်စီးချို့ယွင်းတာ)
ဒိုင်နမို Belt ကြိုးပြတ်တာတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ကားမောင်းနေရင်း ပေါ်လာတာဆိုရင်တော့ စက်သတ်ပြီး Belt ကြိုးတွေ ပြတ်/မပြတ်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ Belt ကြိုးတွေမပြတ်ဘူးဆိုရင်တော့ Alternator ပိုင်းဆိုင်ရာ တစ်ခုခုချို့ယွင်းတာဖြစ်နိုင်ပြီး ကားမှာအသုံးပြုနေတဲ့ Electronic System တွေ (TV, Radio, DVD, CD player, Air Con) အစရှိတဲ့ ဘက်ထရီအားကုန်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေအကုန်ပိတ်ပြီး အနီးဆုံးဝပ်ရှော့မှာ သွားရောက်စစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သတိမပြုဘဲ ဆက်လက်မောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ဘက်ထရီအားကုန်ပြီး လမ်းမှာစက်ထိုးရပ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ABS Warning Light (ABS အချက်ပြမီး)
ABS ဆိုတာ Anti-lock Braking System ဆိုတဲ့ ဘရိတ်စနစ်တစ်မျိုးပါ၊ အခုခေတ်ပေါ်ကားတိုင်းလိုလိုရဲ့ဒိုင်ခွက်ထဲမှာ ဒီ ABS ဆိုတဲ့ မီးလေးထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ဒီမီးလေးကလည်း အပေါ်က ချက်မီးတွေလိုပဲ ကားသော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်လင်းနေရမှာဖြစ်ပြီး စက္ကန့်ပိုင်း ခဏကြာရင် အလိုလိုပျောက်သွားရမှာပါ။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ သော့ဖွင့် စက်နှိုးပြီးချိန် လင်းနေမယ်၊ ကားမောင်းနေရင်း လင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ ကားမှာရှိတဲ့ ABS ဘရိတ်စနစ်တစ်ခုခု ချို့ယွင်းနေပါပြီ။ ဒီမီးက ရုတ်တရက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ အချက်ပြမီးမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီ ABS ဘရိတ်စနစ် ချို့ယွင်းနေပြီဆိုရင်တောင် ပုံမှန်ဘရိတ်စနစ်တွေက အလုပ်လုပ်နေဆဲပါ။ သို့သော်လည်း ဟိုင်းဝေးတွေမှာ အရှိန်နဲ့မောင်းနေချိန် ရုတ်တရက် ဘရိတ်စောင့်အုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အလုပ်လုပ်ရမယ့် ABS System တွေက အလုပ်လုပ်မှာ မဟုတ်လို့ အမြန်ဆုံးစစ်ဆေးပြုပြင်တာတော့ အကောင်းဆုံးပါ။
ABS ဘရိတ်စနစ်မှာ အဖြစ်များတဲ့ ပြဿနာတွေကတော့
Wheel Speed Sensors တွေပျက်စီးတာ
ABS ဘရိတ်ဆုံတွေ၊ Accumulators တွေပျက်စီးတာ
Wireline တွေပျက်တာ တွေအဖြစ်များပါတယ်။
ဒီမီးလေးလင်းလာပြီဆိုရင်တော့ ကျွမ်းကျင်ဝပ်ရှော့တွေမှာ စစ်ဆေးပြုပြင်ရမှာပါ။
SRS Warning Light (Airbag အချက်ပြပြီး)
ဒါကတော့ အသက်ကယ်လေအိတ် Airbag နဲ့ ဆိုင်တဲ့ အချက်ပြမီးပါ။ ပုံစံကတော့ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း လူလေးရယ် ပွင့်ထွက်နေတဲ့ လေအိတ်လေးရယ်ပုံစံပါ။ ဒီမီးလေးကလည်း သော့ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင် ပေါ်လာမှဖြစ်ပြီး စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ အလိုလို ပျောက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ စက်နှိုးလိုက်သည့်တိုင် မပျောက်သေးဘူး ဒါမှမဟုတ် ကားမောင်းနေစဉ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ အသက်ကယ်လေအိတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုခုရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ SRS Warning Light က ချက်ခြင်းအရေးကြီးတဲ့ ပြဿနာမဟုတ်ပေမဲ့ အရေးပါတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုပါ။ ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင် ဒီမီးပေါ်နေလျှက် မပြုပြင်မစစ်ဆေးဘဲ ဆက်မောင်းနေမယ်ဆိုရင် SRS Airbag System တစ်ခုခု ချို့ယွင်းနေတာမို့ မတော်တဆ ယာဉ်တိုက်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ အသက်ကယ်လေအိတ် စနစ်အလုပ်လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ လေအိတ်တွေလည်း ပွင့်ထွက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သေချာစစ်ဆေးပြုပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Airbag Clock Spring လို့ခေါ်တဲ့ Airbag ခွေပျက်တာ (အောက်ပိုင်း စတီယာရင်ဂန်းဖြုတ်တပ်ပြုပြင်ပြီးရင် အဖြစ်များပါတယ်)
Airbag Control Box ချို့ယွင်းတာ
အစရှိတာတွေအဖြစ်များကာ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီး လေအိတ်တွေပွင့်ထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီမီးလေးလင်းနေမှာပါ။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ Airbag တွေရယ်၊ ထိုင်ခုံခါးပတ်တွေရယ်၊ Airbag Control Box ရယ် အသစ်လဲလှယ်ပြီးမှ ဒီ Check မီးပျောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
IMA Warning Light (Integrated Motor Assist) အချက်ပြမီး
ဒီမီးလေးကတော့ ကားတိုင်းမပါပါဘူး။ Hybrid System ဆိုတဲ့ ကားရဲ့အင်ဂျင်နဲ့ IMA Battery တွဲဖက်ထားတဲ့ကားတွေမှာပဲ ပါတတ်တဲ့ မီးလေးပါ၊ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသုံးများတဲ့ Honda အုပ်စုထဲက Civic တို့ Insight တို့မှာပါ ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း မော်ဒယ်မြင့် Honda Fit နဲ့ Fit Shuttle တို့မှာလည်း ဒီမီးလေးပါဝင်ပါတယ်။ ဒီမီးလေးက ပုံမှန်သော့ဖွင့်လိုက်ရင် လင်းရမှာဖြစ်ပြီး စက္ကန့်ပိုင်းကြာရင် အလိုလိုပျောက်သွားရမှာပါ။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ စက်နှိုးပြီးသည့်တိုင် ဒီမီးကလင်းနေတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ကားမောင်းရင်း ဒီမီးကလင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ IMA နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခု ချို့ယွင်းနေပြီလို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဖြစ်များတဲ့ ပြဿနာတွေကတော့ Hybrid Battery နဲ့ IPU Fan ၊ Wiring Error ၊ Control Unit Error တွေကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် Hybrid Battery တွေရဲ့ သက်တမ်းက ၇ နှစ် ဝန်းကျင်ရှိပြီး ဈေးနှုန်းက ၁၀ သိန်းအထက်မှာပဲရှိပါတယ်။ နောက်ထပ် ဒီ Battery တွေက အသစ်ဝယ်ယူလို့မရနိုင်ဘဲ Used တွေသာ ဝယ်လို့ရပါတယ်။ အာမခံလည်း တစ်ပတ်လောက်ပဲပေးပါတယ်။
ဒီမီးလေးအကြောင်း ဘာလို့ထည့်ပြောရတာလဲဆိုရင် အပေါ်က ခေါင်းစဉ်မှာပါတဲ့ အကျော်အခွတွေက ဒီကားတွေမှာ အဖြစ်များလို့ပါ။ ဒီကားတွေမှာပါတဲ့ IMA Battery နဲ့ဆက်စပ်တဲ့ ပြဿနာတွေဖြစ်လာရင် သိန်း ဆယ်ဂဏန်းဝန်းကျင်ကုန်ကျနိုင်တာမို့ ကားဝယ်ရောင်းလောကမှာ ဒီကားတွေရဲ့မီးတွေကို အကျော်အခွတွေလုပ်ပြီး မသိနားမလည်တဲ့သူတွေကို ဂျင်းထည့်လေ့ရှိတတ်ပါတယ်။
Check မီးပေါင်းတယ်၊ Check မီးကျော်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုလုပ်ကြတာလဲ?
ကားတစ်စီးရဲ့ ဒိုင်ခွက်တွေထဲမှာ အဲဒီကားနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့မီးတွေ အစုံပါပါတယ်။ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ Check မီးတွေကတော့ ကားတိုင်းလိုလိုမှာပါတဲ့ အများဆုံးအသုံးပြုတဲ့ Check မီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမီးတွေဟာ အပေါ်မှာ ရှင်းပြခဲ့သလို ကားသော့ On အနေအထားမှာ သော့လှည့်လိုက်တာနဲ့ ပျောက်ရမယ့်မီးတွေရှိသလို ကားစက်နှိုးလိုက်တာနဲ့ ပျောက်ရမယ့်မီးတွေလည်းရှိပါတယ်။ သေချာတာကတော့ ကားစက်နှိုးနေတဲ့အချိန် ကားရဲ့(Instrument Panel) ဒိုင်ခွက်ထဲမှာ ဘာချက်မီးမှ လင်းမနေရပါဘူး။ အဲဒီလို မဟုတ်ဘဲလင်းနေမယ်ဆိုရင် ကားမှာ Error တစ်ခုခုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဖြစ်နေတဲ့ Error ကို Diagnostic Scanner တွေနဲ့စစ်ဆေးပြီး ပြုပြင်လဲလှယ်တာတွေလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါမှသာ ဒိုင်ခွက်ထဲမှာလင်းနေတဲ့ သက်ဆိုင်ရာ check မီးတွေ ငြိမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကားလောကဟာ ကျနော်တို့ပြောသလောက် မရိုးရှင်းပါဘူး။ ဂျင်းထည့်မယ့်သူတွေ အပုံအပင်ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီလူတွေက အဲဒီလို check မီးတွေလင်းနေတဲ့ကားကို ခေတ်မီ ဝပ်ရှော့တွေသွား ပြစ်ချက်ကိုရှာ ငွေကုန်ကြေးကျခံ မပြုပြင်ဘဲ အကျော်အခွတွေလုပ် Check မီးတွေ ဖျောက်လိုက်ကြပါတယ်။ ဒိုင်ခွက်ထဲမှာ ချက်မီးတွေ ဖျောက်လိုက် ကျော်လိုက် ခွလိုက်လို့မရှိတော့ပေမယ့် ကားမှာတော့ Error တွေ ပျောက်မသွားဘဲ ကျီးအာသီးလို အပြင်ကလှတပတနဲ့ အတွင်းပုတ်တဲ့ ကားတွေဖြစ်ကုန်ပါတော့တယ်။
ကားချက်မီးတွေ ဘယ်လို ကျော်ခွလဲဆိုရင်
အများဆုံးက Check မီးတွေကို ပေါင်းလိုက်တာပါ။ သေချာနားလည်အောင်ရှင်းပြရရင် ဒိုင်ခွက်ထဲမှာ Error ကြောင့်ပေါ်နေတဲ့ မီးပေါ့။ ဥပမာ ကားတိုက်ထားလို့ လေအိတ်တွေပွင့်ထားတယ်။ သေချာ ပြန်လည် မပြုပြင်ထားတော့ SRS ဆိုတဲ့ လေအိတ်မီးလေးကပေါ်နေတယ်။ ကားရောင်းမယ့်သူက အဲ့ဒီမီးကို ပျောက်ချင်တယ်။ ပိုက်ဆံ အကုန်ခံပြီး မပြင်ချင်ဘူး။ လွယ်လွယ် ဒီမီးကို ပျောက်အောင် မီးသီးဖြုတ်လိုက်လို့ မရဘူးလားဆိုတော့၊ မရပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကားသော့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ဒိုင်ခွက်ထဲမှာ မီးအစုံလင်းနေမှဖြစ်မယ် မဟုတ်လား။ ဒီတော့၊ ဒီမီးလင်းနေတဲ့ ဆားကစ်ကကြိုးလိုင်းကို ဖြတ်တောက်လိုက်မယ်၊ ပြီးတော့ အခြား ကောင်းနေတဲ့မီး ဘာ Error မှ မရှိတဲ့ မီး၊ သော့ဖွင့် စက်နှိုးလိုက်တာနဲ့ ပျောက်သွားတဲ့ Check မီးလိုင်းက (ဥပမာ-ABS) မီးနဲ့ Parallel သဘော ခွတွဲလိုက်မယ်။ ဒီတော့ SRS မီးဟာ မူလ Error ရှိနေတဲ့ လိုင်းမှာမဟုတ်တော့ဘဲ ABS မီးနဲ့ တွဲနေတာမို့ ABS မီးလင်းရင် လိုက်လင်းမယ်၊ ABS မီးမှိတ်သွားတာနဲ့ သူလည်း လိုက်မှိတ်သွားပါတယ်။
အဲဒီလိုပဲ အင်ဂျင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Engine Check Light တွေရဲ့ ပြဿနာတွေကို မဖြေရှင်းဘဲ စက်နှိုးရင် ပျောက်သွားမယ့် Engine Oil Pressure မီးနဲ့တွဲတယ်။ Battery Charging မီးနဲ့တွဲတယ်။ အဲဒီလိုနည်းတွေနဲ့ အကျော်အခွတွေလုပ် ညာရောင်းကြတာပါ။ အဲဒီလိုနဲ့ Battery Charging မီးတကယ်လိုအပ်လို့ လင်းလာတဲ့အခါကျမှ သူနဲ့တွဲဖျောက်ထားတဲ့ Check မီးပါလင်း၊ စက်ထိုးစစ်တော့ error တွေပေါ်လာ၊ အဲဒီလို အဖြစ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။
ကားဝယ်တဲ့သူကတော့ ကားသော့ဖွင့်လိုက်တော့လည်း မီးတွေ အကုန်စုံတယ်၊ စက်နှိုးလိုက်တော့လည်း မီးတွေ အကုန်ပျောက်တယ်၊ ဘာ Error မှမရှိဘူးအထင်နဲ့ဝယ်လိုက်ပြီးမှ နောက်ပိုင်း ကားမောင်းရတာ အဆင်မပြေတာတွေဖြစ်ပြီး ငွေကုန်ကြေးကျခံ ပြုပြင်စရာတွေ ပေါ်လာတာ ဒုနဲ့ဒေးပါ။
ဒီလိုမျိုး လူလိမ်လူလည်တွေရယ်၊ Ethic မရှိတဲ့ ဝပ်ရှော့ဆရာတွေရယ် ပေါင်းပြီး ကားတွေကို ချက်မီးတွေ ကျော်ခွ ညာရောင်းတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးကားတွေကို မသိနားမလည်လို့ဝယ်လိုက်မိပြီး လက်ထဲရောက်ပိုက်ဘောမိ ပြင်မယ်ဆိုမှ ငွေ သောင်းဂဏန်းကနေ သိန်းဆယ်ဂဏန်းအထိ အကုန်အကျခံ ပြုပြင်လိုက်ရတဲ့ ကားဝယ်မှားသူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အပေါ်မှာ ပြောထားတဲ့ Honda IMA နဲ့ပတ်သက်ပြီး အကျော်အခွတွေများလွန်းလို့ အဝယ်မှားတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
အကျော်အခွ အများဆုံးလုပ်တတ်ကြတဲ့ မီးတွေကတော့
၁။ Engine Check မီး
၂။ Airbag (SRS) လေအိတ်မီး
၃။ ABS မီး
၄။ IMA မီး အစရှိတဲ့ မီးတွေကို အခြား ပြဿနာဖြစ်လေ့နည်းတဲ့ မီးတွေနဲ့ ရောပေါင်း အကျော်အခွ လုပ်တာများပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလို အဖြစ်မျိုးတွေနဲ့ မကြုံရလေအောင် ကား Check မီးတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကျော်အခွဇယားတွေကို ကားဝယ်သူတွေသိအောင် သတိထားနိုင်အောင် ပြောပြတာပါ။
Check မီးတွေ ကျော်ထား/မထား ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
ကားဝပ်ရှော့ပိုင်း ဝါယာရိန်းပိုင်းမှာ အတွေ့အကြုံများကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ ကားဒိုင်ခွက်ထဲက မီးတွေ အပိတ်အဖွင့်တွေကြည့်ပြီး ကျော်ထားခွထားတာတွေ ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါထက်သေချာတာကတော့ ကားဝယ်တော့မယ်ဆို ခေတ်မီ Diagnostic Scan Tool တွေနဲ့ထိုးပြီး Engine ပိုင်း Body ပိုင်း Chassis ပိုင်း အစရှိသဖြင့် Error တွေကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီး အကျော်အခွတွေ Trouble Code တွေ ရှိ/မရှိ သိနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမတွေလည်း ကားတစ်စီးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့ ကားရောင်းဝယ်ရေးဌာနတွေမှာ သေချာစစ်ဆေးဝယ်ယူသင့်သလို အပြင်မှာ ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်လည်း ခေတ်မီ Diagnostic Scan Tool တွေရှိတဲ့ ကားဝပ်ရှော့တွေမှာ ကားရောဂါတွေကို သွားရောက်စစ်ဆေးပြီးမှ ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်လို့ အကြံပြုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေ ညီအစ်ကိုမောင်နှမအားလုံး နည်းပညာ ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝပြီး ကားလောက ဂျင်းများမှ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။
မော်တော်ယာဉ်အမည်ပေါက်ပြောင်းလဲခြင်း အခွန်နှုန်းထားလျှော့ပေါ့ပေးရန် ဆွေးနွေးအကြံပြုချက်အပေါ် ပို့/ဆက် ဒုဝန်ကြီး ပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြား
Smart Card များကို စက်တင်ဘာလကုန်တွင် YBS ယာဉ်မောင်းများအားလုံးထံသို့ ထုတ်ပေးသွားနိုင်မည်ဟုဆို